Ngabe Amabhrend Kufanele Aqhakambise Ngezinkinga Zomphakathi? | Martech Zone
Namuhla ekuseni, ngilandele umkhiqizo ku-Facebook. Ngonyaka odlule, izibuyekezo zabo zahlaselwa ekuhlaselweni kwezepolitiki, futhi angisafisi ukubona lokho kunganaki kokuphakelayo kwami. Iminyaka eminingana, ngangiveza obala imibono yami yezombangazwe. futhi. Ngabuka lapho ukulandela kwami ​​kuguqulwa kwaba ngabantu abaningi abavumelana nami ngenkathi abanye abangavumanga bengalandeli futhi belahlekelwa ukuxhumana nami.
Ngabona izinkampani engangithandana nazo zisuka ekusebenzeni nami, ngenkathi ezinye izinhlobo zandisa ukuhlangana kwazo nami. Ukwazi lokhu, ungamangala ukwazi ukuthi sengishintshe ukucabanga kwami ​​necebo lami. Iningi lokuxhumana kwami ​​nomphakathi okushicilelwe manje kuyakhuthaza futhi kuhlobene nomkhakha kunokuba kugcwele umphakathi kanye nezepolitiki. Kungani? Yebo, ngezizathu ezimbalwa:
Ngiyabahlonipha labo abanemibono ehlukile futhi angifuni ukubacindezela.
Izinkolelo zami azithinti indlela engibaphatha ngayo labo engibasebenzelayo… ngakho-ke kungani ngikuvumela kuthinte ibhizinisi lami?
Akuxazululanga lutho ngaphandle kokukhulisa izikhala kunokuzivala.
Ukungavumelani okunenhlonipho ezindabeni zenhlalo kufile ezinkundleni zokuxhumana. Amabhizinisi manje ahlaselwa ngokuhlukumezeka futhi aduba lapho kunanoma yisiphi isimo esivelwayo noma esibonwa ngumphakathi. Cishe noma yikuphi ukuzivikela noma impikiswano ngokushesha kuyacwila ekuqhathanisweni nokuqothulwa kwabantu noma okunye ukubizwa ngamagama. Kodwa ngabe nginephutha? Le datha ikhombisa ukuqonda ukuthi abathengi abaningi abavumelani futhi bakholelwa ukuthi imikhiqizo eminingi kufanele ibe yiqiniso futhi ithathe obala izindaba zomphakathi.
IHavas Paris / Paris Retail Week Shopper Observer iveze izitayela ezintathu ezigqame ekushintsheni ubudlelwano phakathi kwabathengi nabathengi baseFrance:
Abathengi bakholelwa ukuthi manje sekuyi- isibopho somkhiqizo ukuthatha ukuma ezindabeni zenhlalo.
Abathengi bafuna ukuba njalo ngivuzwa ngokwami ngemikhiqizo abasebenza nayo.
Abathengi bafuna imikhiqizo efuna ukuthi itholakale yomibili online futhi ungaxhunywanga.
Mhlawumbe umbono wami wehlukile ngoba sengiseduze kweminyaka engamashumi amahlanu. Kubonakala kimi ukuthi kukhona ukungqubuzana kwedatha lapho kuphela ingxenye eyodwa kwezintathu zabathengi efuna ukuthi ama-brand athole ezombusazwe yize cishe zonke izindaba zenhlalo ziphenduka ibhola lezepolitiki. Angiqiniseki kangako ukuthi ngifuna ukuvikela umkhiqizo oveza obala ukuma kwawo ezindabeni zenhlalo. Futhi kuthiwani ngesimo sezenhlalo esiphikisayo esihlukanisa abathengi? Ngicabanga ukuthi isitatimende sokuqala singadinga ukubhalwa kabusha:
Abathengi bakholelwa ukuthi manje kungumsebenzi wohlobo lomkhiqizo ukubamba iqhaza ezindabeni zenhlalo… inqobo nje uma isimo salo mkhiqizo sivumelana nomthengi ngokuthi ungawuthuthukisa kanjani umphakathi.
Anginankinga nganoma iyiphi inkampani esekela ngasese izingqinamba zenhlalo, kepha angikwazi ukuzibuza ukuthi ngabe ukucindezela kwemikhiqizo ukuthatha ukuma kuzosetshenziselwa ukuklomelisa noma ukujezisa labo kwezomnotho ngemibono yabo. Izinkinga eziningi zenhlalo zizithoba, hhayi inhloso. Lokhu akubonakali kuyinqubekela phambili kimi - kubonakala sengathi kungukuhlukumeza. Angifuni ukuphoqwa ngamakhasimende ami ukuthi ngime kancane, ngiqashe labo abavumelana nami kuphela, bese ngikhonza kuphela labo abacabanga njengami.
Ngiyakwazisa ukwehluka kwemibono kunokucabanga kweqembu. Ngikholwa ukuthi amathemba, amaklayenti, kanye nabathengi basafuna futhi badinga ukuthintwa komuntu kunokuba kube okuzenzakalelayo, futhi bafuna ukuklonyeliswa ngokwabo futhi babonwe yilezo mkhiqizo abachitha imali yabo abayisebenzele kanzima.
Ngakho-ke, ingabe ukuthatha kwami ​​lesi simo kungukuphikisana?
Isifundo se-Shopper Observer, Phakathi kwe-AI nezepolitiki, ukubaluleka kwesici sabantu kubathengi, yenziwa yiParis Retail Week ngokubambisana neHavas Paris.
Tags: brandUkufaka uphawuIHavas Parisukuthengisa okungaxhunyiwe ku-inthanethiIParis Retail Shopper ObserverezombusazweIzitoloizitolo ezitoloRetailersumvuzoizindaba zomphakathiukuma komphakathi
May 25, 2017 ku-2: 08 PM
Njengenjwayelo. Amaphuzu amahle. Ngiyavuma, ngesitatimende sakho esilungisiwe sokuthi umthengi ufunani. Ngiyakholelwa futhi ukuthi amanye ama-brand okungenani azojeziswa esidlangalaleni ngezimo zawo, kepha ama-dollar angabasekela ngamakhasimende angeziwe avumelana nawo ngasese.
May 30, 2017 ku-12: 09 PM
Izitatimende ezimbili ezibalulekile ezivela ku-athikili yakho ezifingqa lokho engikucabangayo ngale ndaba, "Izinkinga eziningi zenhlalo zizimele, hhayi inhloso" nokuthi "Ngiyakwazisa ukwehluka kwemibono kunokucabanga kweqembu". Ngicabanga ukuthi iningi lalabo abahlukaniswe ngale ndlela abaqondi ukuthi umbono wabo uyilokho kanye, umbono, futhi abakwazi noma ngeke balalele eminye imibono ukukhulisa izinkalo zabo. Ngiyavuma ngokuphelele ukuthi ayikho inkampani okufanele iphushe esidlangalaleni ukuma kwayo kulezi zinkinga, noma nakanjani izobhekana nokuhlukumezeka nganoma iyiphi indlela. Njengenkampani ngingasho ukuthi nginezisebenzi zemibono nezimo ezingafani futhi ngima ngemuva kwenkululeko yokucabanga nokuxhasa abasebenzi abavela kuzo zonke izindawo ezinhlangothini zezepolitiki.